Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » i-United Kingdom » Inketho ephezulu yase-Australia yamaBrits afuna ukuthuthela kwelinye izwe
I-Australia ibe yizwe elinama-Googled kakhulu, ngokusesha okumaphakathi kwanyanga zonke okungu-6,400 okuhlanganisiwe kwamagama afana nokuthi 'Thuthela e-Australia' kanye 'ne-Visa yase-Australia' eyenziwa yi-Brits.
Ucwaningo olusha seluveze ukuthi izakhamizi zaseBrithani zifuna ukuthuthela khona Australia ngaphezu kwanoma yiliphi elinye izwe emhlabeni, ngokosesho lwe-Google.
Ucwaningo luhlaziye idatha yosesho lwe-Google ukuze kutholwe ukuthi imaphi amazwe UK abahlali bebefuna kakhulu uma kuziwa ekuhambeni unomphela.
Ucwaningo luthole lokho Australia bekuyizwe elisetshenziswa kakhulu yiGoogle, elinosesho oluyisilinganiso sanyanga zonke esingu-6,400 oluhlanganisiwe lwamagama afana nelithi 'Thuthela uye ku Australia' kanye 'ne-Visa yase-Australia' eyenziwa yi-Brits.
Ngokusho kwe-Google Trends, isesha igama elithi 'Emigrate to Australia'zikhuphuke ngo-125% ku- UK kusukela ngoMashi 2020 lapho ubhubhane lwe-COVID-19 luqala. Isilinganiso sezakhamuzi zase-UK ezingu-58,000 zifudukela ezweni ngonyaka, zifuna ilanga kanye noshintsho lwendlela yokuphila.
ICanada ingeyesibili efunwa kakhulu yiBrits uma kukhulunywa ngokuthuthela phesheya. Ivolumu yokusesha ehlanganisiwe yamatemu afaka okuthi 'Thuthela uye eCanada' kanye ne-'Canadian Visa' ifika ku-5,400 ngenyanga.
Izwe lesithathu elifunwa kakhulu ukuthi i-Brits ithuthele kulo i-New Zealand enomthamo wokusesha ohlanganisiwe ongu-3,600 ngenyanga. Intshisekelo yezakhamizi zase-UK yokuthuthela eNew Zealand ikhuphuke ngo-14% onyakeni odlule kuphela, ngokusho kwedatha ye-Google Trend.
I-United States ingeyesine izindawo ezifunwa kakhulu yiBrits efuna ukufuduka. Kukhona ukusesha okungu-2,500 kwanyanga zonke okuhlanganisiwe okwenziwa izakhamuzi zase-UK ezifuna ukuthuthela eMelika. INingizimu Afrika ikleliswe endaweni yesihlanu ngokuseshwa okungu-1,330 ngenyanga kokuthuthela kwelinye izwe nama-visa okuvakashela kuleli.
Kunezizathu eziningi zokuthi ama-Brits afune ukuthuthela phesheya, kungakhathaliseki ukuthi kungenxa yesimo sezulu esishisayo, umnotho oshibhile noma ukusondelana nabathandekayo. Ngesilinganiso sama-Brits angu-400,000 afudukayo unyaka ngamunye, le datha inikeza ukuqonda okuthakazelisayo kokuthi kuphi UK abahlali bafisa ukufuduka kulo nyaka.
Amazwe angu-5 aphezulu i-Brits efuna ukuthuthela kuwo
Izwe Inombolo yokusesha kwe-Google okuhlanganisiwe kwanyanga zonke ngokuhlobene nokuthuthela kwelinye izwe
E-New Zealand 3,600
i-United States of America 2,500
Iningizimu Afrika 1,330
Africa Australia Covid-19 Ubhubhane lwe-COVID-19 -Google E-New Zealand Iningizimu Afrika I-united states